အဒါလသ်(ခ)တရားမျှတမှု၊ ကျောသား၊ရင်သား မခွဲခြားမှုကိုလက်တွေ့ အကောင်၊အထည်ဖေါ်ခြင်း။
ဇနျနဝါရီ ၉, ၂၀၁၆ - ၁၁:၁၂ ညနေ
ဤ ခေါင်းစဉ် နှင့် ဆက်နွယ်ပြီး အာယာသွလ္လာဟ် မကာရေမ် မို ရှီး ရာဇီး ၏ ဟောပြော ချက် ကို အေက်ပါအတိုင်း မှတ် သား နိုင်ပါတယ်။
အွန်မသ်တော်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တည့်မတ်ပေးရန်
ဇနျနဝါရီ ၉, ၂၀၁၆ - ၁၁:၁၁ ညနေ
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အနေဖြင့် ယဇီးဒ်(လ.န)၏ ဗိုင်အတ်(သစ္စာခံခြင်း)ကို လက်မခံ သဘောမတူချိန် ပြီးနောက် မဒီနာရွှေမြို့တော်အား စွန့်ခွါဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး နောက် တိုတိုတုတ်တုတ် သို့သော် အဓိပ္ပါယ် ဆိုလိုချက်ကို အလွန်တရာ နက်ရှိုင်းများ ပြားသည့် သေတမ်းစာများကို စီစဉ် တော်မူခဲ့ပြီး မိမိ၏နောင်တော် မိုဟမ္မဒ် ဟနဖီ ယေ ကို ပေးအပ်ခဲ့လေသည်။ ဤ ခေါင်းစဉ် နှင့် ဆက်နွယ်ပြီး အာယာသွလ္လာဟ် မကာရေမ် မို ရှီး ရာဇီး ၏ ဟောပြော ချက် ကို အေက်ပါအတိုင်း မှတ် သား နိုင်ပါတယ်။
အေမာမ်ဟိုစိန် (အ.စ) ၏ ကရ်ဗလာ သို့ ထွက်ခဲ့ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ
ဇနျနဝါရီ ၇, ၂၀၁၆ - ၁၁:၃၂ ညနေ
အေမာမ်ဟိုစိန် (အ.စ) ၏ ကရ်ဗလာ သို့ ထွက်ခဲ့ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ (သို့) အေမာမ်ဟိုစိန် (အ.စ)၏တော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်များ အကြောင်း ကို အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ် မို ရှီးရာဇီးမှ အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
မီးလာဒ် ဒေ နဘီ (ဆွ) ကျင်းပ ၊ အိန္ဒိယ / phptos
ဒီဇငျဘာ ၂၆, ၂၀၁၅ - ၁၁:၃၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ရှိ ဂိုဂျရာသ် ပြည်နယ် နေ စွန္နီ ၊ရှီအာ ဂျမအသ်ဝင်များ မှ မီးလာဒ် ဒေနဘီ (ဆွ) ကို စည်းကား စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာတွင် မီးလာဒ်ဒေ နဗီ (ဆွ) မြင်ကွင်း / photos
ဒီဇငျဘာ ၂၄, ၂၀၁၅ - ၉:၅၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ နိုင်ငံ တကာတွင် မီးလာဒ်ဒေ နဗီ (ဆွ) ကျင်းပနေသည့် မြင်ကွင်းများ ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ မြင် နိုင်ပါတယ်။
မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးတစ်ယောက် ၏ အခက်အခဲ ဒုက္ခ ကိုဖြေရှင်း ခြင်း၏ အကျိုးစဝါးဗ်
ဒီဇငျဘာ ၅, ၂၀၁၅ - ၁၁:၀၅ ညနေ
အဗ်နာ။ ။ မွတ်စလင်မ် တစ်ဦးတစ်ယောက် ၏ အခက်အခဲ ဒုက္ခ ကိုဖြေရှင်း ခြင်း၏ အကျိုးစဝါးဗ် ကို အောက်ပါဟဒီးစ်တော် ကို လေ့လာ မှတ် သား၍ သိရှိ နိုင်ပါတယ်။
ယနေ့မနက် မဒီနာရွှေမြို့ တော် ၏ မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံများ
စကျတငျဘာ ၃, ၂၀၁၅ - ၁၁:၀၉ ညနေ
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မနက် မဒီနာရွှေမြို့ တော် ၏ မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ် ။ အဗ်နာ သတင်းထောက်မှ ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တရားဘက်မှ ကူညီဖေးမခြင်းနှင့် အမှားမတရားနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း။
မေ ၁၀, ၂၀၁၅ - ၁၁:၂၆ ညနေ
ဟဇရတ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ အလ်ဟဂ်ျ နာစေရ် မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး ဟောကြား တော်မူ ထားသည့် ဟိုစိုင်း(န) နီ (အ.စ) တော်လှန်ရေး ၏ ရည်ရွယ် ချက်များမှ စတုတ္ထ ရည်ရွယ်ချက်ကို မြန်မာစာဖတ် ပရိတ်သတ်များ အားလုံးအတွက် အထူးသဖြင့် အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) သခင်အပေါ် အချစ်ထားသူများ အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း။
မေ ၁၀, ၂၀၁၅ - ၁၁:၁၅ ညနေ
ဟဇရတ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ အလ်ဟဂ်ျ နာစေရ် မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး ဟောကြား တော်မူ ထားသည့် ဟိုစိုင်း(န) နီ (အ.စ) တော်လှန်ရေး ၏ ရည်ရွယ် ချက်များမှ ဒုတိယ ရည်ရွယ်ချက်ကို မြန်မာစာဖတ် ပရိတ်သတ်များ အားလုံးအတွက် အထူးသဖြင့် အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) သခင်အပေါ် အချစ်ထားသူများ အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ စွန္နတ်တော်များအား ရှင်သန်တည်မြဲအောင် ပြုခြင်း။
မေ ၁၀, ၂၀၁၅ - ၁၁:၀၉ ညနေ
ဟဇရတ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ အလ်ဟဂ်ျ နာစေရ် မကာရေမ်မိုရှီးရာဇီး ဟောကြား တော်မူ ထားသည့် ဟိုစိုင်း(န) နီ (အ.စ) တော်လှန်ရေး ၏ ရည်ရွယ် ချက်များမှ တတိယ ရည်ရွယ်ချက်ကို မြန်မာစာဖတ် ပရိတ်သတ်များ အားလုံးအတွက် အထူးသဖြင့် အေမာမ် ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) သခင်အပေါ် အချစ်ထားသူများ အတွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နီ ရှဟီးဒ် ၇ ဦး ၏ ဈာပန အခမ်းအနား / ကွမ်းမြို့
ဧပွီ ၂၃, ၂၀၁၅ - ၁၀:၁၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ သက္က်ဖီးရီ သောင်းကြမ်းသူ လူယုတ်မာ ဝဟာဘီများ ၏ ရန်မှ ဟဇရသ် ဇိုင်နဗ် (စ.အ) ၏ ရောင်ဇာတော် အား ကာကွယ် ရင်း အသက်ကို စတေးခဲ့ကြတဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ သား ရှီအာ ရှဟီးဒ် ၇ ဦး ၏ မယသ် များကို ကွမ်းမြို့ တော်တွင် ဒဖ်နာ ခဲ့ပါတယ် ။
အေမာမ် ဟာဒီ (အ.စ) ၏ အာဇါဒါရီ မြင်ကွင်း / အစ္စဖဟန်
ဧပွီ ၂၂, ၂၀၁၅ - ၁၁:၅၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ယနေ့ ဧပြီလ ၂၂ရက်နေ့ သည် ရှီအာ အေမာမ်မီယာ တို့၏ ၁၀ပါးမြောက်အေမာမ် ၊ ၁၂မြောက် မအ်စူးမ် အေမာမ် ဟာဒီ (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။ အစ္စဖဟန် မြို့ တွင် ဘာသာရေး ကျောင်းသားများ မှ ကျင်းပနေသည့် အာဇါဒါရီ ၏ မြင်ကွင်းတစ်ချို့ အား အောက်ပါ အတိုင်း မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။
အေမာမ် ဟာဒီ (အ.စ) ၏ အာဇါဒါရီ မြင်ကွင်း / ကွမ်းမြို့ တော်
ဧပွီ ၂၂, ၂၀၁၅ - ၁၁:၂၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ယနေ့ ဧပြီလ ၂၂ရက်နေ့ သည် ရှီအာ အေမာမ်မီယာ တို့၏ ၁၀ပါးမြောက်အေမာမ် ၊ ၁၂မြောက် မအ်စူးမ် အေမာမ် ဟာဒီ (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကွမ်းမြို့ တွင် ကျင်းပနေသည့် အာဇါဒါရီ ၏ မြင်ကွင်းတစ်ချို့ အား အောက်ပါ အတိုင်း မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ် ။
ဟဇရသ် စိုလိုင်မန်း (အ.စ) အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ ဘရ်ကသ် ကြောင့် ကျေးဌက်များ၏ စကား နားလည်
မတျ ၁၆, ၂၀၁၅ - ၉:၅၉ နံနကျ
မောင်လာအလီ (အ.စ) မိန့်တော်မူလေသည်။ یا عمار ! والله انّ سلیمان بن داود علیه السلام سأل الله تعالی بنا اهل البیت علیهم السلام حتی عُلم منطق الطیر အဓိပ္ပာယ် - အို…အမာရ် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ကစမ် ၊ ဟဇရသ် စိုလိုင်မန်းဗင်ဒါဝဒ် (အ.စ)မှ ငါတို့ အဲဟ် လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ကို အခြေပြုပြီး ကျေးဌက် များ ၏ စကားကို သင်ကြားပေးရန် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် ထံ လျှောက်ထားလေ၏။ ပြီးနောက် သင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဗေဟာရွလ်အန်နာဝါရ် ကျမ်း ၊ကျမ်းအတွဲ ၄၂ ၊ကျမ်းစာမျက်နှာ ၅၆
ဗနီဟာရှင်မ် ၏ လမ်းသွယ်များ ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲ / ကွမ်းမြို့
မတျ ၅, ၂၀၁၅ - ၂:၀၆ ညနေ
သခင်မကြီး ဟဇရသ် ဖွာတွေမာ ဇဲဟ်ရဟ် (စ.အ) ၏ ရင်နှစ် ရင်နာ ဖွယ် ရှဟာဒသ် အထိမ်းအမှတ် အဖြင့် ဗနီဟာရှင်မ် ၏ လမ်းသွယ်များ ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲ ကို ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဂျဝါဒ် ဖွာဇေလ် လန်ကရာနီ မှဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင် ၏ နောက်ဆုံး အန္တိမ တမန် တော်မြတ်ကြီး ဟဇရတ်(သ) မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)
ဒီဇငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၃:၀၀ နံနကျ
ကိုယ်တော်၏ဖခမည်းတော်သည်ကိုယ်တော်အဗ္ဗဒွ လ္လာဟ်ဖြစ်ပြီး၊မယ်တော်၏အမည်မှာသခင်မကြီးအာမေနာဟ်ဖြစ်ပေသည်။ ရဘီးအွရ်အောင်ဝလ်လမြတ်၏(၁၇)ရက်နေ့၊အာမိုးလ် ဖီးလ်နှစ်၌်မက္ကာရွှေမြို့တော်၌ မီးရှူးသန့်စင်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပေ သည်။ကိုယ်တော်လောကကြီးသို့မကြွမြန်းလာမည် အရင်(အ လျင်)ကိုယ်တော်၏ဖခမည်းတော်ကိုယ်တော်အဗ္ဗဒွလ္လာဟ်သည်ကွန်လွန်သွားချေသည်။
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၃:၅၄ နံနကျ
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ၏ ဘဝ သမိုင်း အကျဉ်း
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၃:၃၀ နံနကျ
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ဘဝ သမိုင်း အကျဉ်း ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အေမာမ်ရေဇာ (အ.စ) ရောင်ဇာ ဖက်မှ မြန်မာဘာသာဖြင့်အောက်ပါအတိုင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ အဗ်နာ ပရိသတ်များ အတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
အလီ အဗ်နေ အဘီ သွာလစ်ပ်(အ.စ) အဘယ်ကြောင့် တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ) ၏ (وصی)ဝစီနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရပါသနည်း?
နိုဝငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၃:၂၀ နံနကျ
အလီအဗ်နေအဘီသွာလစ်ပ်(အ.စ)အဘယ်ကြောင့်တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)၏ (وصی)ဝစီနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရပါသနည်း? ဤအတွက် အဖြေအား အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဝအေသ်ရသီ မှန်ပါသလား (သို့မဟုတ်) စွန္နတ်သီ ?
နိုဝငျဘာ ၂၁, ၂၀၁၄ - ၉:၀၃ ညနေ
အင်မတန်ကျော်ကြားသောဟဒီးစ်တော်တစ်ပါးဖြစ်သည့်ဟဒီးစ်စေစ ကာလိုင်းအားဟဒီးစ်ပါရဂူများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ ကျမ်းဂန်များ၌ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။မလွဲမသွေ၎င်းပုံစံနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုသာလျှင်မှန်ကန်ပေမည်။ပုံစံနှစ်မျိုးသည်ကား။ الف:''کتاب اللّہ و عترتی أهل بیتی'' ب:''کتاب اللّہ وسنتی'' ဘယ်အရာ မှန်သလဲဆိုတာ စိစစ်လေ့လာကြည့်ပါစို့ ...
အောကျတိုဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၁၁:၅၃ ညနေ
တမန်တော်မြတ်ကြီးဆွ၏စွန္နတ်တော်များအားရှင်သန်တည်မြဲအောင်ပြုခြင်းအာရှုရာတော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှ အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ မြင့်မြတ်သည့် အစ္စလာမ်သာသနာတော်မှတမန်တော်မြတ်ကြီးဟဇရတ်(သ)မိုဟမ္မဒ် (ဆွ)၏ စွန္နတ်တော်များအား ရှင်သန်တည်မြဲအောင် ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)မိန့်တော်မူသည်။ اَدْعُوكُمْ اِلى كِتابِ الله وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ) صلى الله عليه وآله ( فَاِنَّ السُّنَّةَ قَدْ اُمِيتَتْ وَ اِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِيَتْ، وَ اِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلي وَ تُطِيعُوا اَمْرِي، اَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ အဓိပ္ပါယ်။။အသင်တို့အား အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ကျမ်းတော်မြတ်(ကုရ်အာန်)နှင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ စွန္နတ်တော်ဘက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။အကြောင်းသည် ကားဧကန်မုချ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ စွန္နတ်တော်အား သေဆုံးစေခဲ့ပြီး၊မုချမ လွဲဗေဒ်အတ်(သ)များကို ရှင်သန်အောင်ပြုခဲ့ကြပေသည်။အကယ်၍ ကျွန်တော်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကို လက်ခံသဘောတူမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်၏စကားများကို နားထောင် ပါလေ၊ပြီးနောက် ကျွန်တော်၏အမိန့်များအပေါ် လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးပါလေ။ အသင်တို့အား တိုးတက်ဖွံဖြိုးသည့်လမ်းနှင့် သက္ကဝါအတွက် လမ်းမှန်ကို ညွှန်ကြား ပေးပါမည်။ ကြည့်-သာရီခ်ခေသဗ်ရီ အတွဲ(၃)၊စာမျက်နှာ(၃၈)။ ဗေဟာရွလ်အနဝါ အတွဲ(၄၄)၊စာမျက်နှာ(၃၄၀)။ အဟ်ယာနွရ်ှရှီအာ အတွဲ(၁)၊စာမျက်နှာ(၅၉)။
ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန်ကြားခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း
အောကျတိုဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၁၁:၅၂ ညနေ
ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်မှုနှင့် ပက်သက်ပြီးလည်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)၏ ဩဝါဒတော်များတွင် လာရှိပေသည်။သခင်ကြီး၏ သာဝကတော်များအနေဖြင့် ဤ ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းမွန်မှုဘက်သို့ လမ်းညွှန်ပြခဲ့ပေသည်။ထို့ပြင် သခင်ကြီး၏ နောက်လိုက်၊နောက်သားများ လိုလားအချစ်၊မေတ္တာထားသူများအနေဖြင့်လည်း သခင်အတွက် ဇေယာရတ်(သ)များ ဖတ်ရွတ်ချိန်တွင် ဤရည်ရွယ်ချက်အကြောင်း ကို ရွတ်ဆိုကြပေသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(အ.စ)အနေဖြင့် မိုဟမ္မဒ်ဟနဖီယေသို့ ရေးသားထားသည့် မိမိ သေတမ်းစာတွင် မိန့်တော်မူထားပါသည်။ أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَ أَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ အဓိပ္ပါယ်။။ကျွန်ုပ်တော်လှန်ရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကောင်းရာ၊ကောင်းမှုကို ညွှန် ကြားခြင်းနှင့် မကောင်းရာ၊မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ကြည့်- ဗေဟာရွလ်အန်ဝါရ်ကျမ်း အတွဲ(၄၄)၊စာမျက်နှာ(၃၂၉) -မက်္ကသလ်ခွရဇ်မီကျမ်းအတွဲ(၁)၊စာမျက်နှာ(၁၈၈)
မအ် စူမ်မီး (အ.စ) ရွှေနှုတ်တော်လာ သခင်မကြီး ဖွာတွေမာ (စ.အ) ၏ ဂုဏ် အင်္ဂါတော်များ
စကျတငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၁၀:၄၇ ညနေ
ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသား သည်လောကနှင့်လောကရှိ အရာများကို တပ်မက်မှု မရှိချေ ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မြတ်အလ္လာဟ် ၏ အမိန့်တော်များ (အားလုံး)ရှေ့ ဝယ် ဦးညွတ် မြေဝယ်မကျနာခံပြီး မြတ်အလ္လာဟ် ပြဌာန်းထားသည့် ဝါဂျစ်ဗ် မပြုမနေရ တာဝန်များ ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ပေသည်။ပြီးနောက် မြတ်အလ္လာဟ် တစ်ဆူတည်း တစ်ပါးတည်း ဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေခံပြီး မြတ်အလ္လာဟ်၏ရစူလ် (ဆွ) ကို (အပြည့်အဝ) ထောက်ခံ ပါသည်။ )) ညွန်း - بحارالانوار ، ج 24 ص 3
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်၏အချစ်တော် များထံမှအကူအညီ တောင်းခံခြင်း (သဝါစိုလ်လုပ်ခြင်း)
စကျတငျဘာ ၂၂, ၂၀၁၄ - ၁၀:၁၆ ညနေ
သဝါစိုလ် توسّل ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အာယတ်တော်များ နှင့်အသိဥာဏ်၊ဆင်ခြင်တုံတရားအမြင်၌ ရုပ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အလို့ငှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ထံတော်၌သဝါစိုလ်ပြုခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံး ကိစ္စနှင့်ဝဟာဘီများ၊မွတ်စလင်များအကြားအကွဲအလွဲဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။ ဝဟာဘီများ၏ခံယူချက်သည်ကားကောင်းမြတ်သောအလုပ်များ ဖြင့်(အလ္လာဟ်ထံတောင်းခံရန်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းသည်ပြဿနာမရှိပေ။သို့ သော် اولياء الله အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အချစ်တော်များဖြင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်း ကိုခွင့်မရှိသည့်အပြင်ရှေးက် شرك ၏အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပေကြောင်းခံယူ ထားပေသည်။သို့သော်ကမ္ဘာမွတ်စလင်များအနေဖြင့်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်၏အချစ်တော်များဖြင့်သဝါစိုလ်ပြုခြင်းကိုပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုခံယူထား ကြသည်။ ရှေ့၌အကျယ်ရှင်းပြပါမည်။ ဝဟာဘီများအနေဖြင့်ရှေးက်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေထူသောအနေ ဖြင့်အသုံးပြုသောအချို့အာယတ်တော်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပေ သည်။ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ အထက်ပါအာယတ်တော်သည်အမှန်တကယ်လေ့လာမည်ဆိုလျှင်မိုရ်ှရေက်များ၏ဘုရားများနှင့်ပက်သက်၍ဖြစ်ပေသည်။ထိုဘုရားများ၌ ကောင်းကင်တမန် တော်များလည်းပါဝင်ပေသည်။ ဂျဟေလီယဘ်ခေတ်ကမိုရ်ှရေက်များပြောကြားသည်မှာ- ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းအရာများကိုခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်နှင့်နီးကပ်မှုရှိရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလေ၏။ကျမ်းတော် မြတ်ကုရ်အာန်အနေဖြင့်ဤစကားအားရှေးရ်က်ဟုဆိုထားလေ၏။ နောက်အာယတ်တော်တစ်ပါးသည်ကား- فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً “မည်သူကိုမျှအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်အတူတူမတမ်းတပါလေနှင့်။” အခြားအာယတ်တော်တစ်ပါး၌မိန့်ထားသည်မှာ- دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَىْء وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ “ထိုသူများသည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပအခြားသူများကိုတမ်းတကြလေ၏။ ထို(တမ်းတခံရသူများ)သည်၊မည်သည်အခက်အခဲကိုမျှဖြေရှင်းပေးနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။” ဝဟာဘီများအနေဖြင့်ဤအာယတ်တော်များသည်သဝါစိုလ်၊ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏အချစ်တော်များနှင့်လုပ်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသော အာယတ် တော်များ ဟုထင်နေကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ အခြားတစ်ဖက်၌ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)၏ ဘဝတွင်ရီဝါယတ်တော်အရ သဝါစိုလ်ပြုခွင့်ရှိကြောင်း လက်ခံလိုက်မည် ဆိုလျှင်လည်းတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဝဖသ်ပရိတ် နိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးနောက်၊ သဝါစိုလ်ခွင့်ပြုရှိသေးကြောင်းခိုင်လုံသောမည်သည့်အထောက်အထားမျှ ကျွန်ုပ်(ဝဟာဘီ(ခ)စလာဖီး)တို့ထံ၌မရှိချေ။ ဤအချက်အကျဉ်းချုပ်သည်၎င်းတို့၏သက်သေပြချက်များဖြစ်ပေ၏။ ဆက်လက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။
အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) သည် အမှန်တရား(ခ)ဟက်ခ်၏ ဗဟိုအချက်အချာ
စကျတငျဘာ ၁၀, ၂၀၁၄ - ၃:၁၂ နံနကျ
ဟက်ခ်(ခ)အမှန်တရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) နှင့်အတူ ရှိလေသည်။ အချို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဝေးကွာကြလေရာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုံးဝကြောက်စရာ၊ လန့်စရာ အကြောင်းမဖြစ်ပေ။ အကြောင်းမှာ- ကျွန်ုပ်တို့သည် မြတ်အလ္လာဟ်၏ ကျောင်းတော်ဆင်းများ ဖြစ်ကြပြီး အခြားအဖန်ဆင်းခံများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်း တော်ဆင်းများ ဖြစ်လေသည်။
နှစ်ဘဝသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) ၏ လက္ခာမြတ် အပါးတော် တစ်ချို့
ဩဂုတျ ၂၇, ၂၀၁၄ - ၂:၃၈ နံနကျ
နှစ်ဘဝသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) ၏ လက္ခာမြတ် အပါးတော် တစ်ချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဧပွီ ၁၁, ၂၀၁၄ - ၉:၃၅ ညနေ
သခင်မကြီး (စ.အ) ၏ ဘဝ သက်တမ်းသည် တိုတောင်းလှပေသည်။သို့သော် အင်မတန် ကြီးမား သည့် စာရိတ္တ တော် နှင့် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ အမြောက်အများ အား လက်တွေ့ ကျင့်သုံးပြီး သင်ကြားပြခဲ့ပါသည်။
ဧပွီ ၁၁, ၂၀၁၄ - ၉:၃၁ ညနေ
မောင်လာ အလီ(အ.စ) ၏ နှိပ်စက် ခံရမှု !!!
ဇနျနဝါရီ ၂၁, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ